मन थामेर हेर्नुहोस: आफ्नै आमाले जिउदै बच्चालाई यस्तो सम्म गरिन, प्र’ह’रीको समेत सातो उड्यो !! [भिडियो हेर्नुहोस] – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/मन थामेर हेर्नुहोस: आफ्नै आमाले जिउदै बच्चालाई यस्तो सम्म गरिन, प्र’ह’रीको समेत सातो उड्यो !! [भिडियो हेर्नुहोस]
पोखरामा एक आमाले जन्मने बितिकै को बच्चा लाई मा’रेर फ्याँकेकी छिन् । केही दिन अघि भएको उक्त घटनाकि आ’रोपी आमालाई प्रहरीले गिर’फ्तार गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।घटना स्थल नजिकै जन्माएर त्यहाँ फ्याँकेको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ ।
केही गोठालाहरू गाई चराउन गएका ठाउँ’मा सिनो जस्तो गनाए पछि यताउती हेर्दा खेरि बच्चालाई मा’रेर गाडेको अवस्थामा फेला पारेका थिए । घटना स्थल नजिकै जन्माएर त्यहाँ फ्याँकेको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ । घटना’स्थल नजीकै रग’त भेटिनुले पनि स्थानीयको आशंका’लाई थप बल पुगेको छ । आरोपी महिला का श्रीमान यति बेला परदेशमा नै रोजगाररत भएको बुझिएको छ । विगत २ वर्ष देखि उनी विदेशमा काम गर्दै आएको बताइएको छ । उक्त बच्चा अवै’ध सम्बन्ध बात जन्मिएको हुन सक्ने र उक्त कुरा थाहा पाउने डरले बच्चालाई मा’रेर फालिएको हुन सक्ने स्थानीयको बुझाइ छ स्थानीयको बुझाइ छ । *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
घटना स्थल नजिकै जन्माएर त्यहाँ फ्याँकेको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ । घटना’स्थल नजीकै रग’त भेटिनुले पनि स्थानीयको आशंका’लाई थप बल पुगेको छ । आरोपी महिला का श्रीमान यति बेला परदेशमा रोजगाररत भएको बुझिएको छ । विगत २ वर्ष देखि उनी विदेशमा काम गर्दै आएको बताइएको छ । उक्त बच्चा अवै’ध सम्बन्ध बात जन्मिएको हुन सक्ने र उक्त कुरा थाहा पाउने डरले बच्चालाई मा’रेर फालिएको हुन सक्ने स्थानीयको बुझाइ छ ।
केही दिन अघि भएको उक्त घटनाकि आ’रोपी आमालाई प्रहरीले गिर’फ्तार गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । विगत २ वर्ष देखि उनी विदेशमा काम गर्दै आएको बताइएको छ । उक्त बच्चा अवै’ध सम्बन्ध बात जन्मिएको हुन सक्ने र उक्त कुरा थाहा पाउने डरले बच्चालाई मा’रेर फालिएको हुन सक्ने स्थानीयको बुझाइ छ । घटना’स्थल नजीकै रग’त भेटिनुले पनि स्थानीयको आशंका’लाई थप बल पुगेको छ । आरोपी महिला का श्रीमान यति बेला परदेशमा रोजगाररत भएको बुझिएको छ ।
ल कडाउनको बेला काठमाडौँ कै हो टेलहरु बाहिर ता ल्चा लगाएर भित्र यस्तो हर्कत गर्दै , आज छड्के गर्दा जे देखियो (भिडियो)